Eminyakeni engaphambili, ngabheka wonke amazwe ngenhla kwemihlaba. Ngahlela umgidingo omkhulu emhlabeni: ukudalwa komuntu ozofuna inhliziyo Yami, nokwakhiwa kombuso emhlabeni njengasezulwini, ngivumele amandla Ami agcwalise isibhakabhakha nokuhlakanipha Kwami kusabalale emhlabeni wonke jikelele. Namhlanje–ke, ngemuva kweminyaka eyizinkulungwane, ngiyaqhubeka ngecebo Lami, kepha akekho owaziyo ngecebo Lami noma ukuphatha kwami emhlabeni kanti nombuso Wami abawuboni emhlabeni. Yikho umuntu ebambe utalagu bese eza kimi ezama ukungikhohlisa efuna ukukhokha” imvalamlomo” ngezibusiso Zami ezulwini. Ngokulandelayo uvukuza ulaka Lwami bese ngiyamahlulela kodwa khona kunjalo akavuki, kuba sengathi usebenza ngaphansi komhlaba, engazi utho ngokwenzeka phezu komhlaba uma elandela impumelelo yakhe nje kuphela. Kubo bonke abantu angikaboni noyedwa ophila ngaphansi kokukhanya Kwami. Bahlala emhlabeni wobumnyama, babukeka bejwayele ukuhlala phakathi kobumnyama. Uma ukukhanya kuza baya kude nakho kuba sengathi ukukhanya kuthikameza umsebenzi wabo; ngalokho babukeka becasukile, sengathi ukukhanya kubhidlize lonke uxolo lwabo kwabashiya, bengakwazi ukulala kahle. Okulandelayo, umuntu usebenzisa wonke amandla akhe ukuxosha ukukhanya. Ukukhanya nakho kubukeka kungaqapheli bese kuvusa umuntu ebuthongweni bakhe, uma evuka uvala amehlo akhe, agcwale intukuthelo. Ubukeka engeneme Ngami, kodwa enhliziyweni yami ngiyawazi umphumela. Ngikhulisa ukukhanya kancane kancane ngenze ukuthi bonke abantu baphile ekukhanyeni Kwami bese kuthi kungekudala bajwayele ukuhlanganyela nokukhanya, ngaphezu kwalokho bakwazise bonke ukukhanya. Kulesi sikhathi, umbuso Wami ufikile ebantwini, bonke abantu bayasina ngenjabulo bagubha umkhosi, kungazelele umhlaba ugcwale enkulu injabulo neminyaka eyizinkulungwane eziningi yokuthula iqedwe ukufika kokukhanya …